admin – Page3– ခြာတိတျမလေး
အတက်အဆင်းသွားတိုင်း နာနေတဲ့ ဒူး ကို သိသိသာသာ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ” ဒူးနာ လက်တွေ့ဆေး “
အတက်အဆင်းသွားတိုင်း နာနေတဲ့ ဒူး ကို သိသိသာသာ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ” ဒူးနာ လက်တွေ့ဆေး “ “ကိုယ့်အတွက် မလိုသေးပေမယ့် လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက် ကူးလာတာပါ ၊ ပိုက်ဆံကုန်တာမှမဟုတ်တာ ၊ စမ်းကြည့်ပေါ့” ” ဒူးနာ လက်တွေ့ဆေး ” ဒူးက တောင်ပေါ်ကအဆင်း ခဲလုံးနင်းမိလို့ လည်သလိုဖြစ်ပြီးနာသွားတာ အတက်အဆင်း အတော်သွားမိတိုင်း
ကွမ်းစားတတ်သူများ ကျောက်ကပ် ဒီလိုဆေးပေးပါ
ကွမ်းစားတတ်သူများ ကျောက်ကပ် ဒီလိုဆေးပေးပါ ကွမ်းယာစားသူရော ကွမ်းဟာမစားသူတွေအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဆေးနည်းလေး ပြန်လည်မျှဝေပါရစေ။ ကိုယ်တွေ့ ပျောက်ကင်းသူရဲ့  ပြောပြချက်အရ ဆေးနည်းကကောင်းတယ် ဆေးအနေနဲ့ က လွယ်ကူတယ်။ စစ်ကိုင်းမြို့ရွာထောင်မီးရထားရပ်ကွက်က ကိုစိုးပိုင်ဆံသ ဆိုရင် မသိသူ နည်းပါးပါမယ် သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဗမာဆေးကို တစိုက်မတ်မတ် ဖော်စပ်နေသူတစ်ဦးပါ။ ဆေးဝါးကုသတာ
အော်တိုဂီယာ ကားအသုံးပြုသူတွေ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အချက် (၈) ခု
အော်တိုဂီယာ ကားအသုံးပြုသူတွေ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အချက် (၈) ခု အော်တိုဂီယာကားတွေဟာ လူသစ်တွေအတွက်တော့ ကောင်းချီးတစ်ခုပါပဲ။ လွယ်တယ်၊ မြန်တယ်၊ ဘာမှစိတ်မရှုပ်ရဘူး။ ဒါမဲ့လဲ အချို့အရာတွေကို အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်း မှားတဲ့အခါမှာဆိုရင် ဝမ်းနည်းစရာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ လွယ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ အချို့အကျင့်ဆိုးလေးတွေက သင့်ကိုဒုက္ခဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကားပျက်စီး ယိုယွင်းသွားတဲ့အခါမှာ လဲအစားထိုးဖို့ပစ္စည်းတွေကို သင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရတဲ့အခါ အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သတိထားပီး
စိတ်ဖိစီးမှုများနေတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာများ
စိတ်ဖိစီးမှုများနေတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာများ စိတ်ဖိစီးမှုတိုင်းက အနှုတ်သဘောဆောင်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတလေ စိတ်ဖိစီးမှု အနည်းငယ်ရှိခြင်းက လူတစ်ယောက်ကို တိုးတက်လာစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်တွေကိုသာ ကြုံတွေ့နေရပြီဆိုရင် သင်ဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က မခံနိုင်လောက်အောင် စိတ်ဖိစီးမှုများ နေတာဖြစ်ပြီး သင့်စိတ်ကို အနားပေးဖို့ လိုအပ်နေပြီဆိုတာ သိထားပါနော်။ (၁) အိပ်ချိန်တွေပြောင်းသွားတယ် တကယ်လို့ သင့်ရဲ့အိပ်ချိန်တွေ ပြောင်းသွားတယ်၊
အရိုးကျီးပေါင်းအတွက် ဆေးနည်းတို မင်္ဂလာပါရှင် လက်တွေ့လေးမို့ မျှဝေပါတယ်..အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်…. မမာရဲ့အမေက ခုထိ ဒူးနာတာ ၈ နှစ်ပါ., အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ဆေးနည်းလည်းစုံနေတာပါ., ပြောသမျှ ပျောက်နိုး..ကောင်းနိုးရာရာ လိုက်သုံးတာလည်းကြာ ..ခုထိလည်းမသက်သာ… ခုတော့ ညစဉ်ဆေးစည်းပီးအိပ်တာ ၅ ရက်မှာ အတော်ကိုသိသာပြီးသက်သာလာပါတယ်.. ငွေလည်းမကုန် ဘေးထွက်လည်းမရှိတာမို့ ဘာကြောင့်နာနာစမ်းသုံးကြည့်ပါလို့… ဆေးနည်းကတော့ လက်ဘက်အသားအစို နဲ့..ကျောက်ချဉ်ခဲ
မမှနျရငျ လြှာအဖွတျခံရဲပါတယျဆိုတဲ့ ၂၀၂၀ မှာ ဖွဈလာမယျ့ ဗဒေငျ ဟောစာတမျးမြား
မမှနျရငျ လြှာအဖွတျခံရဲပါတယျဆိုတဲ့ ၂၀၂၀ မှာ ဖွဈလာမယျ့ ဗဒေငျ ဟောစာတမျးမြား (1) ဇန်နဝါရီ ဇန်နဝါရီလမှာ မွေးဖွားသူတွေကတော့ ထူးထူးခြားခြား တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ သူတို့ရဲ့မွေးနေ့ဟာ ၁ လပိုင်းအတွင်း ကျရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လမ်းလျှောက်ရင် ဘယ်တစ်လှမ်း၊ ညာတစ်လှမ်း လျှောက်ကြသူများ ဖြစ်ကြပြီး ရေများများသောက်ရင် သေးများများပေါက်တတ်တာကိုတော့ သတိထားပေးပါ ..
စနေ သားသ်မီးမြားအတှကျ အန်တရာယျကငျး၍ လာဘျရှငျရနျ အကောငျးဆုံးယတွာ… စ​နေသားသ္မီးများအတွက်​ အန္တရာယ်​ကင်း၍ လာဘ်​ရွှင်​ရန်​အတွက်​ …… အုန်းညွှန့်​ နှင့်​သ​ပြေညွှန့်​ကို ဘုရား​ပန်းအိုးတွင်​၄င်း ၊ တံခါး​ပေါက်​ တွင်​ ၄င်း ၊ ထိုးပါ ။( ၇ )ရက်​၁ကြိမ်​ ​ရေလဲ ပေးပါ ။ အိမ်​၏အ​နောက်​​တောင်​အရပ်​တွင်​ ထ​နောင်းပင်​ကို စိုက်​ထားပါ ။
ကိုယျစောငျ့နတျဆိုတာ တကယျရှိပါသလား…? ကိုယျစောငျ့နတျအကွောငျးနှငျ့ လူကို စောငျ့ရှောကျပုံအကွောငျး”
ကိုယျစောငျ့နတျဆိုတာ တကယျရှိပါသလား…? ကိုယျစောငျ့နတျအကွောငျးနှငျ့ လူကို စောငျ့ရှောကျပုံအကွောငျး” ကိုယ်စောင့်နတ်အကြောင်းနှင့် လူကို စောင့်ရှောက်ပုံအကြောင်း” မေး > ကိုယ်စောင့်နတ်ဆိုတာ တကယ်ရှိပါသလား၊ ဖြေ > ကိုယ်စောင့်နတ်ဆိုတာတကယ်ရှိပါတယ်၊ မကောင်းမှုပြုသောသူသည် သူမကောင်းမှုပြုတဲ့အကြောင်းကို သူကိုယ်တိုင်ပတမဦးဆုံးသိ၏ ထိုနောက်သူ၏ကိုယ်စောင့်နတ်သိ၏ ထိုနောက်သူတပါး၏ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်းသိမြင်နိုင်သော် တန်ခိုးရှင်များသိ၏ လို့” ပါရာဇိကဏ်အဌထာ သုဒိန္ဒကဏ္ဍ “အဖွင့်မှာပါတဲ့စာရပ်ကိုထောက်ပြီး လူကိုနတ်စောင့်တယ်ဆိုတာ
ရှူးရှူးရှဲရှဲ ချဉ်ငံစပ် ထိုင်းစာကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် homemade အပ်မှိုထောင်း
ရှူးရှူးရှဲရှဲ ချဉ်ငံစပ် ထိုင်းစာကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် homemade အပ်မှိုထောင်း ပါဝင်ပစ္စည်းများ အပ်မှို ၁ထုပ် သခြားသီး ၁လုံး ကြက်သွန်ဖြူ ၅မွှာ ငြုပ်သီးစိမ်း သံပုရာသီး ၂လုံး ငါးငံပြာရည် ၃ဇွန်း ခရမ်းချဉ်သီး ၃လုံး သကြား အနည်းငယ် နံနံပင် ကန်စွန်းရွက် ၊ မုန့်ဖတ် တို့လိုအပ်ပါတယ်။ အပ်မှိုကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး
အာသီးရောင်၍ လည်ချောင်းနာ ဖြစ်နေသူများအတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်ကင်းစေသောနည်း
အာသီးရောင်၍ လည်ချောင်းနာ ဖြစ်နေသူများအတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်ကင်းစေသောနည်း ရာသီပြောင်းရင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အာသီးရောင်တဲ့ လက္ခဏာဟာ အစားအစာများ မြိုချပါက လည်ချောင်းအတွင်း ခံစားရခက်အောင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး နာကျင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတာနဲ့ ပထမ အဦးဆုံး ရေနွေးဖြူထဲသို့ အိမ်သုံးဆား တစ်ဇွန်းခန့်ထည့်၍ ရောမွှေပြီး ၎င်းဆားရည်(Salt water)ဖြင့် ခေါင်းမော့၍ အာခေါင်အတွင်းရောက်အောင် ပလုပ်ကျင်းပေးပါ။ သဘောင်္သီး